तपाईंको आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ साल फागुन ७ गते। मंगलबार। | Ekhabar Nepal
तपाईंको आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ साल फागुन ७ गते। मंगलबार।
धार्मिक फागुन ७ २०७५ ekhabarnepal
वि.सं. २०७५ साल फागुन ७ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी १९ तारिख। नेपाल संवत् ११३९ सिल्लाथ्व। माघ शुक्लपक्ष। तिथि– पूर्णिमा,
अप्ठ्यारो परिस्थिति अँगाल्दै अघि बढ्नुपर्ने समय छ। काममा केही अलमल तथा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। तापनि, मध्याह्नदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ भने लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्न सकिनेछ। पछि लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। गुरुजन र सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ।
सुरुमा विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। बेसुरमा दिएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। दुविधा बढ्नेछ भने गोपनीयता बाहिरिन सक्छ। व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा मन्दी आउन सक्छ। हतारको निर्णयले काममा अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला।
लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ। अग्रजहरूको सहयोग जुट्नुका साथै शुभचिन्तकहरूबाट उत्साह प्राप्त हुनेछ। पराक्रमी कार्य सम्पादन गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ। सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउनेछन्। उद्योग र व्यापारमा पनि मनग्गे लाभ हुनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनेछ। आँटेको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ।
ठूलो आशा देखाउनेहरूबाट सावधान रहनुहोला। आवेशको निर्णयले समस्या निम्त्याउने हुँदा आत्मसम्मानका लागि मौन रहनु बेस होला। बलजफ्तीले लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। बुद्धिको उपयोगले काम लिने चेष्टा गर्नुहोला। भावना बुझ्न नसक्दा शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन्। बोली व्यहारमा संयम रहँदै गरिएको युक्तिपूर्ण व्यवहारले फाइदा दिलाउनेछ।
अवसरका साथ चुनौती पनि देखा पर्नेछन्। आगन्तुकहरूले अलमल्याउने हुनाले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। खानपानको असावधानीले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ। परिस्थिति अनुकूलै देखिए पनि काम बिग्रने डरले सताउनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
श्रमको मूल्यांकन भए पनि प्रतिफलका लागि समय पर्खनुपर्नेछ। आम्दानी रोकिनाले तत्काललाई कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। छिमेकमा असमझदारी बढ्ने हुँदा होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। आँटेको काममा अनुमानभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ। लाभांश अरूका लागि खर्चनुपर्ला। सरसापटमा धन बाहिरिने देखिन्छ।
दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेछन् भने मिहिनेतको फल प्राप्त हुने समय छ। आम्दानी बढ्नाले नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। पेसा र व्यापारमा राम्रै लाभांश हातलागी हुनेछ। आवश्यक भौतिक साधन जुट्नेछन्। आयआर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। छोटो समयमै राम्रो प्रगति हुनेछ।
वातावरण अनुकूल देखिए पनि समयमा लाभ उठाउने चेष्टा नगर्दा पछि परिएला। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारमा मन जानेछ। आत्मविश्वास, मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ र आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हातलागी हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिफल दिलाउनेछ।
धेरै सक्रियता स्वास्थ्यका लागि बाधक बन्न सक्छ। चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी आए पनि बुद्धि–विवेकले काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। समस्या दर्साउँदा सहयोगीहरूको समेत साथ प्राप्त हुनेछ। काम पूर्ण नभए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ अवश्यै हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।